eNasha.com - फोहोरको फोहोरी खेल !
फोहोरको फोहोरी खेल !
तपाइँ काठमाडौँबासी हुनुहुन्छ ? तपाइँको सुँघ्ने शक्ति कस्तो छ ? एकदमै राम्रो छ भने तपाइँका लागि दुःखको खबर छ । काठमाडौँको फोहोर तह लगाउन बसेको बैठक सहमतिबेगर टुंगिएको छ । यो सहमति हुन नसकेपछि अब अझै एक साता तपाइँ घरबाहिर निस्कनु हुँदा तपाइँको नाकले दुःख पाउनेछ ।
काठमाडौँको फोहोर कहिले कर्मचारीका कारण त कहिले ल्याण्डफिल साइट (डम्पिङसाइट) का स्थानीयबासीका कारण फुटबलजस्तो बन्न पुगेको छ । कहिले फोहोर सफाइ गर्ने कर्मचारीले महानगरपालिकासँग अनेक माग राखेर शहरलाई प्रदूषित बनाइराख्ने र कहिले स्थानीय जनताले फोहार व्यवस्थापन गर्न अवरोध गरेर फोहोरी संस्कृतिलाई बढावा दिने गरेका छन् ।
तर यस पटक भने स्थानीय बासिन्दाको कुनै दोष छैन । उनीहरुले चाहिँदो माग राखेर फोहोर फ्याल्न अवरोध खडा गरेका छन् । तर स्थानीय मन्त्रालय र महानगरपालिकाहरुले त्यस्ता मागलाई गम्भीरताका साथ नलिएर फोहोरमाथि फोहोरी खेल खेलिरहेका छन् । यो खेलका कारण अहिले काठमाडौँ खाल्डोमा चार हजार मेट्रिक टन फोहोर अलपत्र परेको छ । उपत्यकाभित्र अन्दाजी दैनिक तीन सय ५० टन फोहोर दैनिक थुप्रिने गरेको छ ।
काठमाडौँ र ललितपुरबाट दैनिक जम्मा हुने फोहोरलाई धादिङको ओखरपौवास्थित सिसडोल ल्याण्डफिल्ड साइडमा व्यवस्थापन गर्ने गरिन्छ । उक्त क्षेत्रका वासिन्दाहरुले त्यहाँ फोहोर फ्याल्न एघार दिनदेखि रोक लगाइरहेका छन् । उनीहरुको आरोप छ- स्थानीय विकासका लागि गरिनुपर्ने खर्च स्थानीय विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाहरुले गरेका छैनन् ।
स्थानीय जनताले त्यहाँ बिजुली, बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायत फोहोरका कारण नोक्सानी भएको बालीको क्षतिपूर्ति आदिको माग गरेका छन् । तर यो मागबारे सरकारले स्थानीय जनतालाई पटकपटक मिति तोक्दै क्षतिपूर्ति दिन झुक्याइरहेको स्थानीयबासीहरुको आरोप छ ।
गर्नुपर्ने माग पूरा नगर्ने र नगरिनुपर्ने बैठक ज्यादा गर्ने बानीका कारण स्थानीयबासीहरुले ज्यादै दुःख पाएका छन् ।
crisis माओवादी संविधानसभा awards पेट्रोल हल्ला मोबाईल अनुभव सेलेब्रिटी समलिङगी hi-life streets events celebrity festival